Inona ny tranonkala manala baraka? 5 Fomba fiasa mba hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana an-tserasera
Web skraping, extraction, dia teknolojia iray izay manampy amin'ny fikarakarana sy fanangonana angona avy amin'ny tranokala iray na maromaro. Afaka manova ny URL hafa ianao ary mampiasa azy ireo amin'ny endrika CSS, JSON, REGEX, ary XPATH. Noho izany, ny fanasitranana tranonkala dia dingana sarotra amin'ny fanangonana vaovao avy any anaty aterineto - black floral maxi dress. Ny fandaharana sy ny vahaolana amin'ny alàlan'ny tranonkala dia manomboka amin'ny ad-hoc amin'ny rafitra tanteraka automated izay afaka mamadika tranokala na blôgy manontolo ho fampahalalana mahasoa sy mahomby.
Ny fomba hanakanana ny tranokala tsy ara-dalàna manala baraka:
Ny mpikarakara webmaster dia afaka mampiasa fepetra samihafa mba hampihenana na hampitsaharana ny voka-dratsy. Ny fomba tena ilaina dia ireto manaraka ireto:
1. Adikao ny adiresy IP:
Tokony hanakana spammers adiresy IP ianao na amin'ny fitaovana azo antoka.
2. Atsaharo ny API tranonkala:
Tsara ny manaisotra ny API tranonkala izay mety hozahan'ireo rafitra. Ny bots ampiasaina amin'ny tsipika mpanafika dia mety voasakan'ity teknika ity raha tsy misy olana.
3. Jereo ny fifamoivoizan'ny tranonkala:
Zava-dehibe ho antsika rehetra ny manara-maso ny fifamoivoizana amin'ny Internet toy ny kalitaony. Raha tsy mampiasa ny tolotra SEO ianao ary mbola raisina amin'ny fomba fijery maro dia mety ho tratran'ny fifamoivoizana bot ianao.
4. Ampiasao ny kapoka:
Tokony hampiasainao ny môtô captcha mba hanesorana ireo bota ratsy sy . Matetika, ny bots dia tsy afaka mamantatra ny lahatsoratra nosoratana tao amin'ny kapila ary tsy afaka mamaly ireo fanamby toy izany. Amin'izany fomba izany, afaka mahazo fitohanan'ny olona fotsiny ianao ary manaisotra bots.
5. Tolotra ara-tsakafo ara-barotra:
Maro ny orinasa manolotra programa Antivirus sy anti-bot. Manana serivisy manohitra ny fanararaotana amin'ny tranonkala, mpitoraka blaogy, mpamorona, ary mpandrindra. Azonao atao ny manararaotra ny iray amin'ireo serivisy ireo mba hialana amin'ny fanodinana tranonkala tsy ara-dalàna.
Fomba roa samihafa hampiasa tranokala amin'ny aterineto amin'ny aterineto:
Amin'ny tranokala iray, dia afaka manamboatra sitemaps mora ianao ary mijery ny tranonkala mba hahazoana data mahasoa ho anao.
1. Ny vokatra sy ny vidin'ny skrape:
Voaporofo fa ny tombam-bidin'ny vidin-tsolika dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny maridrefin'ny fidiram-bola amin'ny folo na roapolo isan-jato. Raha vantany vao voatsabo ny vokatra sy ny vidiny dia ho mora aminao ny hahafantatra ny fomba hampitomboana ny orinasa an-tserasera sy ny fomba hivarotana vokatra sy serivisy maromaro. Ity fomba ity dia ampiasain'ny tranokala fitsangatsanganana, orinasa e-commerce, ary ireo orinasa hafa an-tserasera.
2. Araho mora foana ny fisehoanao an-tserasera:
Zava-dehibe sy manan-danja amin'ny tranonkala manaparitaka ny sehatra fandraharahana momba ny raharaham-barotra sy ny fanavaozana ny tranokala. Ampiasaina hanamarinana ny fahombiazan'ny vokatra na serivisy manokana, fihetsiketsehana sy fitondran-tenan'ireo mpampiasa, ary ny hoavin'ny orinasa iray. Ity tetikady fitsaboana amin'ny tranonkala ity dia afaka manampy amin'ny fanaovana lisitra sy tabilao mifototra amin'ireo fanadihadian'ny mpampiasa sy orinasa momba ny varotra.